Ngaba ungumlandeli wenyaniso wamaHindu? Ukukhangela indawo yonqulo ekufanele uhambele ngexesha lakho lobomi, wongeza Jagannath Rath Yatra 2019 lwakho uluhlu! Eyona nto, uPuri Rath Yatra ngokwenene into ekufuneka ilandelwe ubuncinci kanye ngexesha lokuphila.
SandPebbles inikeza amaphakheji emangalisayo Jagannath Rath Yatra ukwenzela ukuba unakho uhambo olungenasiphelo kunye neendawo zokuhlala ngexesha leexesha ezigqithisileyo zesixeko. Enoba ufuna ukuhamba ukusuka eBhubaneswar okanye uhlale kwisixeko ngexesha lePuri Rath Yatra, senza onke amalungiselelo okubhuka kwehotele ukukhwela, ukutyelela, kunye nonke, ukwenza uhambo lwakho lukaThixo lukhunjulwe. Wethu Iphakeji ye-2019 iJagannath Rath Yatra iquka:
Omnye wabameli bethu uya kufumana kwi-Biju Patnaik International Airport, eBhubaneswar kwaye anikezele kwihotele. Ukuba i-flight iyafika ekuseni, unokutyelela iSixeko saseSmart okanye ungashiya i-Puri, yi-60 Km drive ukusuka kwisixeko. Ukutya isidlo kuya kunikwa ehotele.
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya ePuri ngendlela ebalaseleyo nebalabala. Ukutyelela i-Dhauli, i-Ashokan Rock Edict kunye ne-Shanti Stupa, i-Pipili, i-Applic Village Village, iSakhigopal, i-Radha Krishna etempileni kunye neRughurajpur, i-Village of Painting. Emva kokufika ePuri, jonga kwihotele. Ukuhlwaya eNkundleni yeJagannath ethempelini ukuba bathathe inxaxheba kwi-Aalati Darshan. Emva koko, buyela ekamelweni lehotele ukuze udle kunye nokuhlala ubusuku.
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya ePuri Badadanda. Ilungiselelo elikhethekileyo laliya kwenziwa phezu kophahla lwehotele ukujonga uRath Yatra. Ukuba ufuna ukubona iRath Yatra ephahleni ngokukhawuleza, nceda uqhubeke ekuseni. Nceda uqaphele ukuba iPakethe yepakethi, ibhotile yamanzi, ikhefu lepakethi iya kunikwa. Ngobusuku uza kubuyela kwiHhotela ukuze udle kunye nokulala okuphumayo.
Emva kwesidlo sakusihlwa, lungele ukujonga indawo. Ukutyelela iNarendra Pokhari, iThemath Temple, iMarandandeshwar, ithempeli likaLakmi, iGanesh Ithempeli, iThempeli laseGundicha, iSrggadwar, iGrafu yoMhlambi waseRughurajpur, iThempeli leBimala kunye nezinye ezininzi. Buyela ehotele ukuba udle kunye nokulala ubusuku obuhle.
Uya kulonwaba elunxwemeni. Indawo eya kubahamba ngeeninzi, abaza ukuthabatha ukucoceka kwendalo. Enye yeelwandle eziluncedo kakhulu eNdiya, apho amanzi aseBang of Bengal ahlonipha khona ubuhle bawo. Unokuzonwabisa ngamaza apholileyo ehlezi phambi kobhantshi ehlekisa ngamachule e-ice cream kunye nezinye izinto zokutya okanye uhambo olude ukuya kwi-Puri-Konark Marine Drive.
Thenga uze uhlabe intliziyo yakho. Omnye akakwazi ukuphosa imisebenzi eyenziwa ngePuri. Khangela ubucwebe besiliva kunye ne-Sambalpuri kunye neBomkai izambatho ziza kukugubungela ngomsebenzi wazo onzima.
Shayela ku Konark, ujonge umdla obalaseleyo wePuri-Konark Marine Drive. Ngaphandle kokuya kwiNkundla yeRatha Yatra, abahambi ePuri bangabheka ezinye iinketho ezingabonakaliyo kwezokhenketho. I-Puri Ibhantshi, i-Konark Beach, i-Konark yeTempile ye-Sun yindawo ekhangayo kakhulu kwezokhenketho ezisePuri. Emva kokutya kwasekuseni kuhambela kwiNdlu yeKonark Sun, i-ASI Museum (Valiwe ngoLwesihlanu), iTampeli likaRamchandi kunye neThangibhaga Beach. Ngemva kwemini, zijonge kwi-beach yegolide kwaye uphumule kwi-market ye-Puri. Uza kuhlala u-Puri.
Emva kwesidlo sakusasa, uya kufakwa ngexesha elifanelekileyo kwi-Airport ye-Bhubaneswar okanye kwisikhululo sesitimela ukuya phambili.